Home » Interviews » CEO Qantas ao amin'ny COVID, ny vaksininy ary ny fiaramanidina
Miaraka amin'ny famoahana ny vaksinin'ny COVID-19 sy ny olona eran'izao tontolo izao vita vaksiny, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia miomana amin'ny zavatra antenaina fa hisy fitakiana fitakiana dia an-dranomasina.
Qantas Airline dia nanomboka ny dian'ny coronavirus tamin'ny 20 isan-jaton'ny fahaiza-manao talohan'ny COVID tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020.
Miverina ny fangatahan'ny mpandeha na dia mbola tsy feno tanteraka aza.
Ny kaompaniam-pitaterana dia hitantana ny orinasa amin'ny vola, midika izany fa misy fotsiny ampy hanefana ny vidin'ny fandidiana sy hampiasana ny mpanamory, ny ekipanay ary ny mpiasa hiasa.
Vakio hatrany - na mipetraha ary mihaino - handrenesana ny hevitry ny Lehiben'ny Executive Qantas Airline, Alan Joyce, momba ny toe-javatra misy ny fiaramanidina ankehitriny.
Eto, Peter Harbison, filoha Emeritus an'ny CAPA - Ivotoerana fiaramanidina, miresaka amin'i Alan Joyce, CEO Qantas, momba ny COVID sy ny fiaramanidina amin'ny resadresaka tsy voamarina.
Miarahaba antsika ary, miarahaba anao amin'ny alàlan'i Alan Joyce izay tale jeneralin'ny Qantas, vondrona Qantas. Tongasoa Alan, miverina amin'ny CAPA Live. Tsara ny manana anao.
Tsara ny miresaka aminao indray Peter toy ny mahazatra. Mampalahelo fa tsy ataontsika mivantana izany, saingy mieritreritra aho fa hiverina amin'ny valandresaka CAPA mivantana amin'ny dingana iray izay hahafinaritra.
Izahay dia mikasa ny hanao izany fotoana fohy dia fohy. Ie.
Ary manantena an'izany aho. Misaotra, Alan. Betsaka ny zavatra azo resahina. Andao isika hanomboka amin'ny sehatra an-tokantrano raha afaka manao izany isika. Manana fiatombohana fiatoana be dia be izahay. Tsy maintsy ho nahasosotra anao izany. Mihevitra ve ianao fa efa manakaiky kokoa ny fahazoana trano eto an-toerana isika, izany hoe ny fanjakana, ny protokolota iraisam-pirenena rehefa manidy ny sisin-tany isika ary mahita vanim-potoana toy izany?
Page 1 ny 8 Prev Manaraka